အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်တဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ပါ… – PVTV Myanmar
·7months ago ·39 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်တဲ့ ဆေးတက္ကသိုလ်(မန္တလေး) ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာခင်မောင်လွင်၏ CORONA VIRUS Report ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Like – 18K Share – 3086
Myint Thuzar says:
Be safe, be healthy saya Lwin!
အလွမ်း အလွမ်း says:
2021-06-20 at 7:20 PM
Sein Sein Htay says:
2021-06-20 at 8:27 PM
ဆရာကြီး ကို အခုလို ကျန်းကျန်းမာမာ နဲ့ တွေ့ ရလို့ အရမ်းဝမ်းသာတယ်
Thinn Wah Wah Khin says:
2021-06-20 at 9:07 PM
ဆရာကြီးကို ရုပ်ရော အသံရော ပြန်တွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာရသလို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်😍😍
Thu Zar Than says:
ခ်စ္ ခင္ ေလး စား ရ ပါ ေသာ ဆရာ ျကီး
Tin Thandar Myo says:
Be safe, be healthy and fighting sayargyi.
Nayi Min Htet says:
2021-06-20 at 9:52 PM
Welcome back Sayagyi
ဆရာကြီး ဘေးကင်း ကျန်းမာ အန္တာရယ် ကင်းပါစေ🙏🙏🙏
Covid 19ကပ်ဆိုး ကြီးကိုလည်း အမြန်​ကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ🙏🙏
ေက်ာ္ ဗလ ေမာင္ says:
ဆရာႀကီး ေဘးကင္း က်န္းမာ အႏၲာရယ္ ကင္းပါေစ🙏🙏🙏
Covid 19ကပ္ဆိုး ႀကီးကိုလည္း အျမန္​ေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ၾကပါေစ🙏🙏
2021-06-20 at 10:19 PM
May you be healthier, safer and stronger Sayargyi.
2021-06-20 at 10:58 PM
ဆရာကြီး ဘေးကင်းကင်း နဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာ ပြန်တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ် အားလည်းဖြစ်ရပါတယ် ဆရာကြီး ကျန်းမာပါစေ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြန်ဆုံး ကျဆုံးပါစေ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
2021-06-21 at 6:31 AM
Phoe Kyaw says:
2021-06-21 at 8:15 AM
Thanks Millions Sayargyi for your invaluable information and strong support!!!
Tracy Cates says:
2021-06-21 at 8:57 AM
Very glad to see you again, Sayargyi. Be safe and healthy and thanks as always for supporting and standing along with Myanmar people.
2021-06-21 at 5:01 PM
အရေးတော်ပုံ မုချအောင်ရမည် ။
Isbella May says:
2021-06-22 at 3:14 PM
ဆရာကြီးကို အခုလို ကျန်းကျန်းမာမာ မြင်​တွေ့ရလို့ ​၀မ်းသာပါတယ်ရှင့် စိတ်သ​ဘောထား အရမ်း​ကောင်းမွန်တဲ့ ဆရာကြီး ​ဘေးအန္တာရယ် ကင်းပါ​စေ ဆရာလိုချင်တဲ့ ငြိမ်းချမ်း​မှု​တွေ့ ရရှိပါ​စေ ဆရာကြီးရှင့် 🙏🙏🙏
2021-06-22 at 3:58 PM
ဆရာ ႀကီး ေဘးကင္ကင္း နဲ က်န္း က်န္း မာမာ ျပန္ေတြရ တာကို ဝမ္းသာပါတယ္ အားလည္ျဖစ္ရပါတယ္ ဆရာႀကီး က်န္းမာပါေစ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္အျပန္တံုးက်ဆံုးပါေစ. အေရ ေတာ္ ပံု ေအာင္ရ မည္ ဒီ ျမန္မာ ေတြ ညီရဲလာေဟ ညီတယ္ေဟ. အေရ ေတာ္ ပံု ေအာင္ ရ မည္ ငယ္ငယ္
Helen Zar says:
2021-06-23 at 1:22 AM
2021-06-23 at 9:44 AM
Thae Thae Mar says:
2021-06-23 at 10:46 AM
2021-06-23 at 10:49 AM
Angelina Khai says:
2021-06-23 at 1:44 PM
ဆရာကြီးလဲ ကျန်းမာ ဘေးကင်းပါစေ 🙏🙏🙏
Shwe MiMi says:
2021-06-23 at 7:50 PM
Htoon Lynn Aung says:
2021-06-24 at 9:52 AM
ဆရာကြီး ကျန်းမာပါစေ။အရေးတော်ပုံ အော်ရမည်။
Than Than Nyein says:
2021-06-24 at 11:37 AM
Better Fly says:
2021-06-24 at 11:49 AM
2021-06-24 at 7:13 PM
2021-06-24 at 7:16 PM
2021-06-24 at 7:19 PM
2021-06-25 at 8:28 AM
ဆရာ ကြီး တို့ အား လုံး ကျန်း မာ ပြီး ဘေး ရန် ကင်း ကြပါ စေ။
Aye Thin Si says:
2021-06-25 at 1:56 PM
ကိုေက်ာ္ ေဆြ says:
2021-06-25 at 4:36 PM
Ayemyint Than says:
Khaing Naychyi Lin says:
2021-06-26 at 9:04 PM
သမီးအ​ဖေနဲ့အမျိုးသား​​တော့ကိုဗစ်​ဖြစ်​နေပြီဆရာကြီးရယ် ဒီ​ခေတ်ကြီးထဲကြမှပဲ 😥
Khin Phyu Phyu says:
2021-06-26 at 9:27 PM
Khaing Zin Tint says:
2021-06-27 at 1:14 PM
Kin Aung says:
Be safe ,wishing u to be healthy